အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသံမှမကြားရတဲ့ မေတိုးခိုင်
10 Apr 2018 . 10:40 AM
အဒေါ်ဖြစ်သူ “အိန္ဒြာကျော်ဇင်”ရဲ့တူမ “မေတိုးခိုင်” ဆိုပြီး ပရိသတ်သိလာခဲ့ရာကနေ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အနုပညာပိုးပါဝင်နေပြီး အခုဆိုရင် အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ရင် အရင်က ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ပြီး လေ့လာဖြစ်ပေမယ့်လို့ အခုချိန်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ထက် ပြင်ပကလူတွေရဲ့အပြုအမူ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုလေ့လာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒီဇိုင်နာဖြစ်ပေမယ့်လို့ ကိုယ်တိုင်က ဒီဇိုင်နာလုပ်ရတာထက် သရုပ်ဆောင်လုပ်ရတာကိုပဲ ပိုပြီးဝါသနာပါပါတယ်တဲ့။ မေတိုးခိုင်ဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသံမှမကြားရတာကြောင့် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကတော့….
“အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမကြားရတာ Single ဖြစ်နေလို့ပါ။ အခုချိန်ထိလည်း Single ပါပဲ။ တစ်ခါမှလည်း အချစ်အကြောင်းကို မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါဘူး။ ချစ်သူထားမယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကက နားလည်မှုအများကြီးပေးနိုင်မယ့် ကိုယ်နဲ့အတူတူ အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မယ့်သူမျိုးကို ထားမှာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။ အချစ်ရေးကို အာရုံစိုက်မိရင် အနုပညာအလုပ်တွေကို စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့သွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်း ထပ်မံပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ်ကလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ အခုချိန်မှာ ကိုယ့်ကို Propose လာလုပ်တဲ့သူလည်း မရှိသေးပါဘူး။ အချစ်ရေးမစဉ်းစားဖြစ်တာက အခုလက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲ Focus လုပ်ထားလို့ပါ။ အချစ်ရေးဘက်ကို အာရုံမထားတာပါ။ ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီအချစ်ရေးဘက်ကို အာရုံစိုက်နေရင် ဒီဘက်က အနုပညာအလုပ်တွေပေါ်မှာ လစ်ဟင်းပြီး စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့သွားမှာစိုးလို့ပါ”ဆိုပြီး ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာသံမှမကွားရတဲ့ မတေိုးခိုငျ
အဒျေါဖွဈသူ “အိန်ဒွာကြျောဇငျ”ရဲ့တူမ “မတေိုးခိုငျ” ဆိုပွီး ပရိသတျသိလာခဲ့ရာကနေ သူကိုယျတိုငျကလညျး အနုပညာပိုးပါဝငျနပွေီး အခုဆိုရငျ အဒျေါဖွဈသူနဲ့အတူတူ ဇာတျကားတှရေိုကျကူးနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ သရုပျဆောငျတာနဲ့ပတျသကျရငျ အရငျက ရုပျရှငျကားတှကွေညျ့ပွီး လလေ့ာဖွဈပမေယျ့လို့ အခုခြိနျမှာတော့ ရုပျရှငျထကျ ပွငျပကလူတှရေဲ့အပွုအမူ လှုပျရှားမှုတှကေို ပိုလလေ့ာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မိခငျဖွဈသူ ဒီဇိုငျနာဖွဈပမေယျ့လို့ ကိုယျတိုငျက ဒီဇိုငျနာလုပျရတာထကျ သရုပျဆောငျလုပျရတာကိုပဲ ပိုပွီးဝါသနာပါပါတယျတဲ့။ မတေိုးခိုငျဟာ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာသံမှမကွားရတာကွောငျ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး မေးမွနျးဖွဈခဲ့တာကတော့….
“အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမှမကွားရတာ Single ဖွဈနလေို့ပါ။ အခုခြိနျထိလညျး Single ပါပဲ။ တဈခါမှလညျး အခဈြအကွောငျးကို မစဉျးစားခဲ့ဘူးပါဘူး။ ခဈြသူထားမယျဆိုရငျတော့ အဓိကက နားလညျမှုအမြားကွီးပေးနိုငျမယျ့ ကိုယျနဲ့အတူတူ အမွဲပြျောပြျောရှငျရှငျနနေိုငျမယျ့သူမြိုးကို ထားမှာပါ” လို့ ဆိုပါတယျ။ အခဈြရေးကို အာရုံစိုကျမိရငျ အနုပညာအလုပျတှကေို စိတျအာရုံစူးစိုကျမှု လြော့သှားမှာကိုလညျး စိုးရိမျနတေယျလို့လညျး ထပျမံပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“ကိုယျကလညျး ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျတဲ့သူမြိုးဆိုတော့ အခုခြိနျမှာ ကိုယျ့ကို Propose လာလုပျတဲ့သူလညျး မရှိသေးပါဘူး။ အခဈြရေးမစဉျးစားဖွဈတာက အခုလကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျဖို့အတှကျကိုပဲ Focus လုပျထားလို့ပါ။ အခဈြရေးဘကျကို အာရုံမထားတာပါ။ ညီမကိုယျတိုငျကလညျး အဲဒီအခဈြရေးဘကျကို အာရုံစိုကျနရေငျ ဒီဘကျက အနုပညာအလုပျတှပေျေါမှာ လဈဟငျးပွီး စိတျအာရုံစူးစိုကျမှု လြော့သှားမှာစိုးလို့ပါ”ဆိုပွီး ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။